ကြည့်ရှုသူတိုင်း သဘောကျသွားမယ့် ရွှေသမီးရဲ့ Tik Tokဟာသ အလွဲ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ကြည့်ရှုသူတိုင်း သဘောကျသွားမယ့် ရွှေသမီးရဲ့ Tik Tokဟာသ အလွဲ ဗီဒီယိုလေး
သရုပ် ဆောင် ရွှေသမီး က တော့ ပရိသတ် တွေ ရယ်မော သွားရ လောက်အောင် အခွီ ဗီဒီယို လေးတစ်ခု ကို ဝေမျှ လာပြန် ပါတယ် ။ အနုပညာ လမ်းကြောင်း ထက်ကို ဝင်ရောက် လာ ခဲ့တာ မကြာ သေးပေမယ့် လည်း ပရိသတ် အသိ အမှတ်ပြု အားပေး ချစ်ခင်မှု ကို အချိန် ခဏလေး အတွင် ရရှိ ခဲ့တဲ့ သူမက အောင်မြင်မှု တွေကိုလည်း တစ်ခဲနက် ရရှိထားသူပါ ။ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တွေမှာ အ ကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် မှုတွေ နဲ့ ပါဝင် ရိုက်ကူးလေ့ ရှိတဲ့ သူမကို အနု ပညာရှင် အချင်းချင်း ကပါ အားပေး အချစ်ပိုလေ့ရှိ တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
လိမ္မာရေးခြား ရှိပြီး မိဘ အပေါ် လိုလေသေး မရှိအောင် ထောက်ပံ့လေ့ ရှိတဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ထား လေးက မွန်မြတ်တာ ကိုလည်း တွေ့ရ ပါတယ် ။ လက်ရှိ မှာတော့ အနုပညာ အလုပ် တွေကို ဆက် တို က် ဆိုသလို ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေ ရတဲ့ ရွှေသမီး က လှုပ်ရှားမှု တိုင်းကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ဝေမျှ လေ့ ရှိ တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ယခုမှာ လည်း ကြည့်မိ သူတွေ ရယ်မော သွား ရလောက် အောင် ဆော့ ကစား ထားတာ Tiktok ဗီဒီယိုလေး တစ်ခုကို တင်ပေး လာခဲ့ပါ တယ် ။
ဒါ က တော့ သူမကိုယ် တိုင် သီချင်း ဆိုပြီး အသံသွင်း ထားကာ ပြန်နားထောင် ကြည့်မှ အသံ တစ်မျိုးဖြစ် နေရတဲ့ အတွက် အံ့သြနေ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ရုပ် တည်ကြီး နဲ့ သရုပ်ဆောင် ထားပြီး ကြည့် မိသူ ပရိသတ် တိုင်း ရယ်မော သွားစေမိမှာ အသေအချာ ပဲဖြစ်လို့ အဆို ပါ ဗီဒီယို ဖိုင်လေးကို ပြန်လည် တင်ဆက်ပေး လိုက် ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေ ကလည်း ရွှေသမီး ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို ကြည့်ပြီး comments မှာ တစ်ခုခု ရေးသား ပေးခဲ့ပါအုန်း နော် … .
သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေရႊသမီး က ေတာ့ ပရိသတ္ ေတြ ရယ္ေမာ သြားရ ေလာက္ေအာင္ အခြီ ဗီဒီယို ေလးတစ္ခု ကို ေဝမၽွ လာျပန္ ပါတယ္ ။ အႏုပညာ လမ္းေၾကာင္း ထက္ကို ဝင္ေရာက္ လာ ခဲ့တာ မၾကာ ေသးေပမယ့္ လည္း ပရိသတ္ အသိ အမွတ္ျပဳ အားေပး ခ်စ္ခင္မႈ ကို အခ်ိန္ ခဏေလး အတြင္ ရရွိ ခဲ့တဲ့ သူမက ေအာင္ျမင္မႈ ေတြကိုလည္း တစ္ခဲနက္ ရရွိထားသူပါ ။ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီး ေတြမွာ အ ေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ မႈေတြ နဲ႔ ပါဝင္ ရိုက္ကူးေလ့ ရွိတဲ့ သူမကို အႏု ပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္း ကပါ အားေပး အခ်စ္ပိုေလ့ရွိ တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
လိမၼာေရးျခား ရွိၿပီး မိဘ အေပၚ လိုေလေသး မရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေလ့ ရွိတဲ့ သူမရဲ့ စိတ္ထား ေလးက မြန္ျမတ္တာ ကိုလည္း ေတြ႕ရ ပါတယ္ ။ လက္ရွိ မွာေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္ ေတြကို ဆက္ တို က္ ဆိုသလို ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ေန ရတဲ့ ေရႊသမီး က လႈပ္ရွားမႈ တိုင္းကို လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္မွာ ေဝမၽွ ေလ့ ရွိ တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ယခုမွာ လည္း ၾကည့္မိ သူေတြ ရယ္ေမာ သြား ရေလာက္ ေအာင္ ေဆာ့ ကစား ထားတာ Tiktok ဗီဒီယိုေလး တစ္ခုကို တင္ေပး လာခဲ့ပါ တယ္ ။
ဒါ က ေတာ့ သူမကိုယ္ တိုင္ သီခ်င္း ဆိုၿပီး အသံသြင္း ထားကာ ျပန္နားေထာင္ ၾကည့္မွ အသံ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ ေနရတဲ့ အတြက္ အံ့ၾသေန ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ႐ုပ္ တည္ႀကီး နဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားၿပီး ၾကည့္ မိသူ ပရိသတ္ တိုင္း ရယ္ေမာ သြားေစမိမွာ အေသအခ်ာ ပဲျဖစ္လို႔ အဆို ပါ ဗီဒီယို ဖိုင္ေလးကို ျပန္လည္ တင္ဆက္ေပး လိုက္ ပါတယ္ ။ ပရိသတ္ေတြ ကလည္း ေရႊသမီး ရဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို ၾကည့္ၿပီး comments မွာ တစ္ခုခု ေရးသား ေပးခဲ့ပါအုန္း ေနာ္ … .
Previous post ပုရိသတို့ ရင်ခုန်သံမြန်သွားစေမယ့် နန်းအမရာရဲ့ ဆက်ဆီကျကျလေး ရိုက်ထားတဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုလေး
Next post အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ရင်ကိုဝုန်းဒိုင်းကြဲအောင် အမြဲ လုပ်တတ်တဲ့ ခေးကြီးလုကတော့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ စွဲဆောင်လိုက်ပြန်ပြီ